Tsy hifindra monina any Sina ny angon-drakitra iCloud anao, hadisoana nohamafisin'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Tsy hifindra monina any Sina ny angon-drakitra iCloud anao, bug namboarin'i Apple izy io
Ny fanodinana ny angon-drakitra manokana, ary koa ny fampahalalana ananantsika ao anaty rahona, dia olana saro-pady. Ary tsy miaro afa-tsy ny fiarovana azy ireo aho, ankoatry ny fiainana manokana, tsy maintsy mahafeno fepetra takiana amin'ny firenena tsirairay izany. Fitsipika eo an-toerana no mitondra azy ary noho izany ny data-tsika dia tsy afaka na aiza na aiza.
Amin'ity herinandro ity Nanambara i Apple fa nisy fampahalalana sasantsasany avy amin'ny iCloud sy serivisy any Shina nifindra tany amin'ny GCBD, izay hitantana ny angon-drakitra any andrefan'i Sina. Miaraka amin'izany dia manaraka ny lalàna napetraky ny governemanta eo an-toerana i Apple. Fa sendra diso nahatratra ny mpanjifa iCloud eran'izao tontolo izao ity fifandraisana ity.
Ny vaovao dia avy TechCrunch , izay manondro fa mpampiasa Apple marobe, tsy avy any Etazonia ihany, no mety hahazo ny fifandraisana avy amin'i Apple. Niteraka ahiahy teo amin'ny mpampiasa sasany izany, izay milaza fa tsy harovana mafy ny angona.
Ora vitsy lasa izay, Nahazo mailaka avy amin'i Apple ireto mpampiasa ireto, nampandre azy ireo fa sendra nandiso ny hafatra izy ireo. Ny mailaka dia manondro fa tsy hafindra any Sina ny angon-drakitrao, ary tsy nahy nalefa tamin'ny mpampiasa vitsivitsy izany hafatra izany.
Nahazo mailaka vao haingana ianao nampandre anao ny fanovana tsy ho ela ny serivisy iCloud ho any Chine. Tsy nahy nalefa ity mailaka ity. Tsy nisy fanovana natao tamin'ny kaonty iCloud anao.
Miala tsiny indrindra fa nahazo ity mailaka ity ianao. Ity mailaka ity dia tsy natao ho an'ny mpanjifa izay firenena voasoratra anarana ao amin'ny Apple ID dia Sina. Betsaka ny mpanjifanay izay firenena voasoratra anarana ao amin'ny Apple ID fa tsy Shina, no nahazo izany mailaka izany ihany koa.
Tsy vao sambany i Apple no mila manova ny fenitra napetraka, mifanaraka amin'ny fenitra sinoa. Fa ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy ary mila mampifanaraka azy ireo ianao. Ohatra iray dia ny fotoana tsy maintsy nanonganan'i Apple ny fampiharana izay mamela hifandray amin'ny VPN ivelany. Niteraka korontana io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tsy hifindra monina any Sina ny angon-drakitra iCloud anao, bug namboarin'i Apple izy io
Ny fanandramana amin'ny afo ao amin'ny Apple Store, Apple dia mitentina 1 lavitrisa dolara, fiarovana amin'ny macOS, fahalemen'ny Spectre sy Meltdown ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Apple dia manana vokatra amidy ao amin'ny fivarotany miaraka amin'ny teknolojia AirPort